Akụkọ - Gịnị kpatara ị ga -eji họrọ Global -Air Air Compressor?
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Global-Air Air Compressor? Ndị ahịa niile na-eche banyere isi ihe atọ nke ngwaahịa bụ ọnụahịa, ịdị mma yana ọrụ ịre ahịa.
Maka ọnụahịa, anyị na-emepụta ngwaahịa dị elu, anyị na-ejikwa ngwa dị elu n'ahịa, yabụ na anyị anaghị atụnyere akara ala dị ọnụ ala nke ndị nrụpụta ya enweghị ezigbo mma. Ọ bụrụ na anyị atụnyere Altas, Ingersoll Rand na akara ndị ọzọ ama ama, anyị nwere uru doro anya.
Banyere ịdị mma, anyị emepụtala ihe nrụpụta ihe karịrị afọ 20, anyị nwere nyocha nnata siri ike, nyocha usoro yana usoro nyocha ọpụpụ, anyị na -agbaso njikwa mma 5S, anyị gafere asambodo ogo ISO9001 ma na -enyekwa ndị ọrụ anyị ọzụzụ oge niile. Anyị ebupụla ihe karịrị mba 90 gburugburu ụwa ruo ugbu a wee nweta aha ọma maka ịdị mma ngwaahịa ahụ wee merie ọtụtụ ndị ahịa na -eguzosi ike n'ihe.
Maka ọrụ ire ere, anyị nwere teknụzụ kachasị elu iji mepụta ngwaahịa anyị. A na -enyocha ngwaahịa niile 100% tupu ebufe ya. Anyị na -enye ndị ọrụ nwere ahụmịhe nkwado 24/7. Anyị na -enyekwa ndị ahịa anyị ọzụzụ na ntuziaka nwụnye. Anyị na -arụ ọrụ n'iwu Ụlọ Ọrụ Ikikere nyere ikike na obodo ọ bụla iji nye ndị ahịa anyị ọrụ mpaghara na ịrụ ọrụ nke ọma kwa ụbọchị. Ndị ọrụ aka anyị nwere ike nye ọrụ dị na saịtị ma ọ bụ ebe ọrụ ikike mpaghara.
Site na ịhọrọ Global-air, ị họrọla ngwaahịa a rụpụtara nke ọma, nke arụpụtara nke ọma site na ụlọ ọrụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ.
Oge ezipụ: Mee-13-2021